Xiddigii hore ee Arsenal iyo Barcelona Alex Song oo ku biiray koox ka dhisan dalka Jabuuti |
HomeCiyaarahaXiddigii hore ee Arsenal iyo Barcelona Alex Song oo ku biiray koox ka dhisan dalka Jabuuti
Xiddigii hore ee Arsenal iyo Barcelona Alex Song oo ku biiray koox ka dhisan dalka Jabuuti
November 9, 2020 Admin Ciyaaraha 0
Xiddigii hore ee Kooxaha Arsenal iyo Barcelona ee Alex Song ayaa ku biiray koox ka dhisan Jabuuti, isla markaana ka ciyaarta horyaalka dalkaasi.
Alex Song oo haatan 33-sano jir ah ayaa heshiis labo sanadood ah u saxiixay kooxda AS Arta Solar 7 ee ka dhisan dalka Jabuuti.
Heshiis xor ah ayuu ugu wareegay kooxda xiddigii hore ee xulka qaranka Cameroon, waxaana uu ka tagay kooxda reer Switzerland ee Sion bishii Maarso ee sanadkan 2020 isaga iyo siddeed xiddig oo kale kaddib markii ay diideen inay hoos u dhigaan mushaharkooda sababto la xiriira Korona Fayras.
Ka hor inta uusan ka ciyaarin horyaalka Switzerland, Song waxa uu u soo dheelayay kooxda Rubin Kazan ee ka dhisan Ruushka ee halkaasoo uu ku rafaaday isagoo u sheegay wargeyska Telegraph inuu Ruushka ku noqday mid bilaa guri ah oo cidlo dareemaya, isagoo yiri: “Sannad ayaa iiga lumay Kazan”.
Alex Song ayaa horay uga tirsanaa Arsenal intii u dhaxeysay 2006 ilaa 2012, waxaana uu qeyb muhiim ka ahaa safka kooxda Gunners ka hor inta uusan sanadkii 2012-kii ku biiri kooxda Barcelona, halkaasoo uu kursiga keydka saaxiib kula noqday.
Sanadkii 2010-kii ayuu Song u ciyaaray xulkiisa qaranka Cameroon oo uu kala qeyb galay Koobka Adduunka, waxaana uu sidoo kale qeyb ka ahaa xulkii Cameroon ee ka qeyb galaya Koobka Qarammada qaaradda Afrika ee 2010-kii.
Song ayaa sidoo kale haysta baasaboor Faransiis ah, waana tan fududeysay inuu ka mid noqdo kooxda ka dhisan dalka Jabuuti ee AS Arta Solar 7.